July 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 31, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalfadhiga 44-aad ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Arbaco soo xirmay, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka. Intii kalfadhiga uu socday, kaasoo soo bilaabmay bartamihii bishii June, golaha baarlamaanka ayaa ka dooday arrimo […]
July 29, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa maanta oo Isniin ah xukun dil toogasho ah ku riday askari, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada. Guddoomiyaha maxkamada ee ciidamada Puntland Cawil Axmed Faarax ayaa sheegay in askariga lagu […]
July 29, 2019 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubin muhiim ah oo katirsan maleeshiyada ISIS ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed, sida taliska Mareykanka ee Afrika ay ku sheegeen war-saxaafadeed. Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacday buuraha Golis ee Puntland, sida ay talisku […]
Garowe-(Puntland Mirror) A key member of ISIS militant was killed in a US airstrike, US Africa Command said in a statement. The strike happened in the Golis Mountains of Puntland on Saturday, according to the […]
July 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa isku diyaarinaysa dabaaldega sanadgeeradeeda 21-aad ee asaaska dowladnimadeeda oo ku beegan 1-da Agoosto. Garoowe oo ah caasimada Puntland ayaa waxaa ka socda diyaargaroowga ugu balaaran iyadoo labo beri ay ka harsanyihiin […]
July 26, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Janaraal Stephen J. Townsend ayaa maanta oo Jimce ah la wareegay xafiiska, isaga oo hoggaamin doona taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Townsend ayaa sheegay in uu safarkiisa ugu horeeya uu […]
July 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay golaha sare ee la-talinta Madaxweynaha, sida lagu sheegay digreeto xalay ka soo baxday madaxtooyada. Guddiga ayaa ka kooban lix xubnood oo kala ah: 1. Nuuradiin […]